Adeegsiga Caqliga Iyo Gaadhidda Yoolka - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Adeegsiga Caqliga Iyo Gaadhidda Yoolka
Adeegsiga Caqliga Iyo Gaadhidda Yoolka
Dunida isbadalkeedu waa joogto, fikirka aadamigu mar kasta waxa uu xidhiidh la leeyahay hadba duruufta wehelka u ah.
Duruufahaasi is barkan ee laga yaabo inay kakan yihiin waxa qofku ku waajahaa laba midkood oo kala ah, caadifad iyo hawo been ah, iyo fikir xeel dheer iyo caqliga oo ay kartiyi ku lammaan tahay.
Haddii caadifaddu ay ka xoog badato heerka adeegsiga caqliga dadaal kasta oo aad bixisaa waxa uu ku dhamaada natiijo la’aan ama eber. Waxa uu ahaa go’aan marka horeba ku dhisnaa laab lakac iyo cadho. Guuldarada ka dibna waxa aad u arkaysa in shakhsiyaad, koox ama deegaan in ay sabab u yihiin natiijo la’aanta ama guuldarada.
Ilbidhiqsigaasi waa laba midkood inaad fashil noqoto oo aad aqbasho inaad iskaga dhex noolaato inta ay geeridu kuu imanayso, iyo inaad caqliga iyo xikmadda ka faa’iidaysato oo aad siiso jawaab ah “ Maya waan ka gudbi kara, anigoon taageero cidna ka sugin, laakiin daariiqa aan marayo waa mid aan anigu jeexanayo oo aan ka fikiray halka uu I geynayo iyadoo aanan adeegsanayn caadifad iyo laab la kaca ka dhasha cadhada iyo nacaybka aad qof u qabto.
Adeegsiga caqliga ka madax banana caadifadda iyo caajiska waa ka ay shakhsiyaad iyo ummado badan horumar ku gaadheen. Wxaa fiican inaad ka xorowdo cabsida wahsiga, caajiska iyo fadhiidnimada caqliga, oo ah isha ay ka soo burqato saboolnimada iyo nolol xumidu. Qof kasta waa hal abuure noloshiisa ah, laakiin dad yar ayaa awood u leh inay nafahood kor uga qaadaan fikradaha wakhiga.
Shimbirtu haddii ay buulkeeda amaan ayay ku haysataa , haddii aanay ka soo bixin laakiin taasi maaha xikmadda Allah (sw) ugu sameeyay baalasha. Caqliga waa in qofku ka faa’iidaysto oo aanu noqon mid fadhiida ah, oo aan horumarkiisa uga fikirayn.
Previous articleWaayaha Nolosha Iyo Isbedelada Joogtada Ah
Next articleColaadda Itoobbiya: Hal sano oo dagaal ah xaal waa sidee?